लण्डनमा बक्स अफिस अवार्ड : नाम थियो यति, को को गए सेलिव्रेटी ? « Ramailo छ
लण्डनमा बक्स अफिस अवार्ड : नाम थियो यति, को को गए सेलिव्रेटी ?
समय : 6:02 pm
शनिबार आयोजना हुने बक्स अफिस अवार्डका लागि केही कलाकारहरु बिहिबार र शुक्रबार लण्डनमा उडेका छन् । लण्डन उड्नेमा करिश्मा मानन्धर, आर्यन सिग्देल, केकी अधिकारी, अनुप विक्रम शाही, बर्षा सिवाकोटी लगायत मात्रै नाम चलेका सेलिव्रेटीहरु छन्, बाँकी को को छन् ? खोज्नु पर्ने हुन्छ ।
चलचित्र पत्रकार आरके सुवेदीको संयोजकत्वमा आयोजना भएको अवार्डमा केही नाम चलेका कलाकारहरु मात्रै लण्डन उडेपनि अवार्डको पोस्टरमा भने दर्जन बढी नाम चलेका कलाकारहरुको फोटो थियो । जसमा भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, श्वेता खड्का, दयाहाङ राई, दिपकराज गिरी, दिपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, अनमोल केसी लगायको फोटो छ । यी नाम मध्ये एक जना पनि सेलिव्रेटी अवार्डका लागि लण्डन उडेका छैनन् । ब्यानरमा फोटो राखिएका कलाकारहरु नहुँदा टिकट काटेका दर्शकले कस्तो मान्लान् ? सिमित कलाकार मात्रै सहभागी भएको अवार्ड कार्यक्रम कस्तो होला ? के यस प्रकारले विदेशमा आयोजना गरिएका अवार्डले नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउँला ?